Wariye Idle Macalin Maxamed oo wali kujira Gacanta Booliska Puntland | maakhir.com
Wariye Idle Macalin Maxamed oo wali kujira Gacanta Booliska Puntland
Bosaaso:- Waxa maalintii 12-xidhan wariye Idle Macalin Maxamed isaga oo ku jira Xabsiga wayn ee Magaalada Bosaaso,wariyahaasi ayaa ka hawl gali jiray Idaacada Somaliweyn ee fadhigeedu yahay Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho waxana lagu soo eedeeyay inuu qaaday sawiro la xiriira arimaha Tahriibta.
Wariyi Idle Macalin Maxamed ayaa waxa laga soo qabtay meel laga dhoofiyo tahriibta ee ku taala magaalada Bosaaso waxana la sheegay inuu halkaasi warbixn ka diyaarinayay,waxana gacanta ku soo dhigay ciidanka Booliska ee magaalada Bosaaso kuwaasi oo sheegay inuu wariyahaasi Puntland ka gudbiyay war aan sugnayn waa sida ay hadalka u dhigeene.
Wariye Idle ayaa ilaa intii la xidhay aan Maamulka Puntland wax jaab ah ka bixin , waxana uu jiraa xabsiga wayn ee ku yaala duleedka Magaalada Bosaaso, in kastoo xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay hadana waxa jira cabsi iyo werwer xoogan uu qabo wariyahaasi maadaaba uu ku jiro Xabsi.
Wariye Idle Macalin Maxamed ayaa wararka Gobolada Puntland uga tabin jiray Hay”adda warbaahineed ee Somaliweyn ee ku taala Magaalada Muqdisho,waxana uu ahaa wariye aad looga yaqaan Guud ahaan Gobolada Dalka isaga oo ay Canbaareyeen xadhigiisa dhamaan Suxufiyiinta Somaliyeed iyo waliba Hay”adda ha u dooda xuquuqda wariyaasha.
Puntland ayaa mudooyinkan waxay dhexda u xidhatay inay ugaadhsato wariyaasha madax banaan kuwaasi oo lagu daad gureeyo jeelasha iyaga aan wax la taaban karo oo danbe ah aan galin mana jiraan cid ka hadashay xadhiga wariyaasha Puntland.
Tani ayaa ku soo beegmaysa xil uu wariye Cawaale Jaamac Salaad uu Jeel ku jira mudo gaadhaysa ilaa 20- cisho isaga oo la sheegay inay Puntland ku soo eedaysay inuu xidhiidh dhaw la sameeyay Budhcada afduubatay wariye Faransiis ah dhawaan walaw Cawaale arinkaas ganafka ku dhuftay oo beeniyay.
« Cade Muuse iyo Isimada Puntland oo kulan wada qaatay maanta
Nuur Cadde oo Muqdisho ku soo Foole »